ဒီအခြိနျ … ဘာကိုလိုခငျြလဲလို့ မေးမယျဆိုရငျတော့ – Shinyoon
ဒီအခြိနျ … ဘာကိုလိုခငျြလဲလို့ မေးမယျဆိုရငျတော့
December 2, 2020 by Shin Yoon
ကိုယျကွိုးစားခဲ့တဲ့အရာအတှကျ ကိုယျတနျဖိုးထားတဲ့သူဆီက … ခြီးကြူးစကားလေးတှေ …အကဲဖွတျပေးတာလေးတှလေိုခငျြကွတာဟာ … ဓမ်မတာပါ ။ တကူးတက မဟုတျတောငျ သတိတရလေး ရှိစခေငျြကွတာခညျြးပဲ ။
အမြားကွီး မြှျောလငျ့ထားတာ မဟုတျပမေယျ့ .. ကိုယျ ပငျပနျးထားတဲ့အရာအတှကျ အသိအမှတျပွုမှုလေးတဈခုပဲ လိုခငျြတာပါ။ ဒီအရာတှနေဲ့ လှဲရတဲ့အခါ ကြှနျမ တို့မှာ …. ရငျတှေ နာရတယျ ။
ဂရုတစိုကျနဲ့ … စောငျ့ခဲ့ပွီးမှ မမေ့လြေ့ော့လြော့ပဈခံထားရတဲ့ ခံစားခကျြတှကေ တကယျကို ခံရခကျတာပါ။ ကွုံခဲ့ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့အခါမှသာ … ဘာကွောငျ့ ဒီလို ဖွဈနတောလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှေ ကိုယျကိုယျတိုငျ မေးဖို့ သတိတှေ မရခဲ့သလို ကိုယျ့လမျးကိုယျလြှောကျဖို့ လမျးတှေ မွငျလို့မရတော့ဘူး လမျးတှပြေောကျတယျဆိုတာ ဒီအခြိနျမှ … တကယျပါ။ တကယျ လမျးတှေ ပြောကျခဲ့ဖူးတယျဆိုရငျတော့ ယုံလိုကျပါ။
ကိုယျခကျခကျခဲခဲနဲ့ ကွိုးစားခဲ့တဲ့အရာတှဟော… သူ့အတှကျ ဘာမှမဟုတျဘူးဆိုတဲ့ အရာတှေ ဖွဈလာတဲ့အခါ … ကြှနျမတို့မှာ ပွိုလဲရပါတယျ ။ ဘာကိုဆကျပွီး လိုခငျြရမှနျးမသိအောငျ ဘာအတှကျဆကျပွီး … အားတငျးထားရမလဲဆိုတာ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ တကယျကို မဲ့ပါတယျ ။
ကိုယျဟာ … သူ့အတှကျ ဘာမှ အရေးမပါပါလားဆိုတဲ့အတှေးက … ကိုယျဟာ သူ့အတှကျအရေးပါခငျြတယျဆိုတဲ့ စိတျတှကေို အသသေတျနသေလိုပဲ … ဘာဖွဈခငျြလဲလို့မေးတဲ့အခါ ဘာမှ မဖွဈခငျြတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ အဖွဟော … ဘာမှ ဖွဈမလာမှနျးသိတဲ့အခါမှသာ ထှကျလာတတျတာပါ။
ကြှနျမဟာ …မြှျောလငျ့တတျခဲ့ဖူးတယျ ။ စောငျ့စားတတျခဲ့ဖူးတယျ ။ လိုခငျြခဲ့ဖူးတယျ ။ ပွီးတော့ …. ထပျပွီး မြှျောလငျ့ခဲ့ဖူးသေးတယျ ။
ဒါပမေယျ့ … ဒီအခြိနျ … ဘာကိုလိုခငျြလဲလို့ မေးမယျဆိုရငျတော့ ကြှနျမ ဘာကိုမြှျောလငျ့ရမလဲ ဆကျပွီးစောငျ့စားရမလဲဆိုတဲ့အတှေးတှနေဲ့ ဆကျပွီး နာကငျြနဖေို့ …သတ်တိတှေ မရှိခဲ့တော့ဘူးလို့ပဲ ဖွဖွေဈမယျ ထငျတယျ ။
ကိုယ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာအတွက် ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့သူဆီက … ချီးကျူးစကားလေးတွေ …အကဲဖြတ်ပေးတာလေးတွေလိုချင်ကြတာဟာ … ဓမ္မတာပါ ။ တကူးတက မဟုတ်တောင် သတိတရလေး ရှိစေချင်ကြတာချည်းပဲ ။
အများကြီး မျှော်လင့်ထားတာ မဟုတ်ပေမယ့် .. ကိုယ် ပင်ပန်းထားတဲ့အရာအတွက် အသိအမှတ်ပြုမှုလေးတစ်ခုပဲ လိုချင်တာပါ။ ဒီအရာတွေနဲ့ လွဲရတဲ့အခါ ကျွန်မ တို့မှာ …. ရင်တွေ နာရတယ် ။
ဂရုတစိုက်နဲ့ … ​စောင့်ခဲ့ပြီးမှ မေ့မေ့လျော့လျော့ပစ်ခံထားရတဲ့ ခံစားချက်တွေက တကယ်ကို ခံရခက်တာပါ။ ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့အခါမှသာ … ဘာကြောင့် ဒီလို ဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မေးဖို့ သတိတွေ မရခဲ့သလို ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ဖို့ လမ်းတွေ မြင်လို့မရတော့ဘူး လမ်းတွေပျောက်တယ်ဆိုတာ ဒီအချိန်မှ … တကယ်ပါ။ တကယ် လမ်းတွေ ပျောက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ ယုံလိုက်ပါ။
ကိုယ်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာတွေဟာ… သူ့အတွက် ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ … ကျွန်မတို့မှာ ပြိုလဲရပါတယ် ။ ဘာကိုဆက်ပြီး လိုချင်ရမှန်းမသိအောင် ဘာအတွက်ဆက်ပြီး … အားတင်းထားရမလဲဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်တွေ တကယ်ကို မဲ့ပါတယ် ။
ကိုယ်ဟာ … သူ့အတွက် ဘာမှ အရေးမပါပါလားဆိုတဲ့အတွေးက … ကိုယ်ဟာ သူ့အတွက်အရေးပါချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေကို အသေသတ်နေသလိုပဲ … ဘာဖြစ်ချင်လဲလို့မေးတဲ့အခါ ဘာမှ မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ အဖြေဟာ … ဘာမှ ဖြစ်မလာမှန်းသိတဲ့အခါမှသာ ထွက်လာတတ်တာပါ။
ကျွန်မဟာ …မျှော်လင့်တတ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ စောင့်စားတတ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ လိုချင်ခဲ့ဖူးတယ် ။ ပြီးတော့ …. ထပ်ပြီး မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးသေးတယ် ။
ဒါပေမယ့် … ဒီအချိန် … ဘာကိုလိုချင်လဲလို့ မေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မ ဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲ ဆက်ပြီးစောင့်စားရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ဆက်ပြီး နာကျင်နေဖို့ …သတ္တိတွေ မရှိခဲ့တော့ဘူးလို့ပဲ ဖြေဖြစ်မယ် ထင်တယ် ။
နာကငျြမှုက လူကို အမြားကွီး ပွောငျးလဲသှားစပေါတယျ သငျခနျးစာတှသော ယူတတျရငျပေါ့ ။
ဘာကိုမှ မမြှျောကိုးပဲ ပေးတတျကမျးတတျပါစေ